Semalt Expert manazava ny vaovao lehibe momba ny fanafihan'ny botatra Mirai
Anao dia iray amin'ireo orinasa avo lenta izay mifehy tsara ny tambazotra nomena anarana nomena an'i Mirai botnet izay nitondra orinasa maherin'ny 100.000 tao anaty aterineto. Araka ny tatitra nataon'ilay orinasa Dyn, ny fanafihan'i Botira Mirai dia iray amin'ny hatsaram-panahy satria nanana hery nanafika nahatratra 1.2Tbps
Andrew Dyhan, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa ny fanafihana botnetin'i Mirai dia maty raha ampitahaina amin'ny fanaparitahana ny fandàvana ny fanafihana amin'ny serivisy. Ny fanafihan'i DDoS dia miankina tanteraka amin'ny fandraràna tambajotra iray manokana miaraka amin'ny fifamoivoizana tsy misy fiafarana raha tsy tapaka izany. Araka ny lahatsoratra bilaogy vao haingana navoakan'i Dyn, Mirai botnet dia navoaka tamin'ny aterineto zavatra gadget (IoT) toy ny mpilalao DVR sy ny fakantsary nomerika.
Ahoana no anaovana ny botnet?
Ankoatra ny fandraisana anjara tamin'ny fanafihana iray namely an'i Dyn, Mirai botnet dia nafatotra tamin'ny fanafihana iray namely ny bilaogy security security, 'Krebs on Security', dia nihazakazak'i Brian Krebs, iray amin'ireo mpanoratra Washington Post teo aloha..Araka ny famotsorana nataon'i Brian Krebs, ny fanafihana nahazo ny blaoginy momba ny fiarovam-baovaon'ilay fanafihana dia nahazo hery tamin'ny fanafihana 665Gbps.
Ny lahatsoratra vao haingana navoakan'i David Fidler, mpanatanteraka ao amin'ny Birao misahana ny Raharaham-bahiny dia nanambara fa ny fandàvana ny fandehanana an-tserasera amin'ny fanafihana izay namely an'i Dyn dia nitatitra fa nisy ihany koa ireo tranonkala lehibe toy ny Netflix, ny Guardian, CNN, Twitter, ary Reddit. Mirai botnet no tena fototry ny tranokalany monina any Eoropa sy Etazonia.
Fidler, manam-pahaizana manokana momba ny aterineto, dia nanao tatitra momba ny fanafihan'i Dyn, izay nilazan'i Fidler fa tsy mahatsiaro fanafihana amin'ny aterineto miaraka amin'ny herin'ny tafika maherin'ny 700 Gbps. David Fidler koa dia nanampy hoe ny orinasa sy ny orinasa dia nanana olana lehibe momba ny fiarovana ireo fitaovana 'Internet of Things', izay tsy nisy vahaolana tsara kokoa natolotra hiadiana amin'ny fanafihana tahaka ny iray tavela amin'i Dyn, niharan'ny fanafihana cyber.)
Araka ny tatitra iray vao haingana navoakan'ireo manam-pahaizana manokana momba ny aterineto sy sampan-draharahan'ny governemanta, dia nalemy noho ny tsy fandriam-pahalemana an'i IoT i Io. Amin'izao fotoana izao dia mitohy ny fanadihadiana iray nataon'ny vondron'ny Dyn, raha nanambara ny orinasa fa ny Mirai botnet no fanafihana fiarovana lehibe indrindra amin'ny aterineto ary manaparitaka tranokala lehibe miorina any Etazonia sy Eoropa.
Naneho hevitra ihany koa i Joe Weiss, serivisy manokan'ny manampahaizana manokana momba ny aterineto ary mpanao gazety iray manoratra amin'ny fandrahonana elektronika, dia nanamarika ihany koa momba ny fandrahonana maloto nataon'i Mirai botnet. Araka ny voalazan'i Weiss, Mirai botnet dia heverina ho toy ny mpizarazara amin'ny lalao ao amin'ny sehatry ny fiarovana amin'ny serasera, satria sarotra ny maminavina ny endrika endrika fanafihana ataon'ny Mirai botnet.
Nolazain'i Joe Weiss koa fa ny fanafahana ny fandàvana ny fanafihana amin'ny serivisy dia manomboka amin'ny fanafihana manokana ary miova amin'ny endrika endrika fanafihana. Weiss dia namintina tamin'ny filazàna fa ny botan'i Mirai dia karazana fanafihana izay mety handao ny orinasa iray ateraky ny fanafihana cyber. Araka ny filazany, ny fiasana amin'ny fomba hiadiana amin'ny botnets dia ny hany vahaolana afaka miaro ny rafitra fanaraha-maso ny solosaina amin'ny tsy fisian'ny fandrahonana elektronika. Eritrereto ny ho mailo sy handinihana ny ankamaroan'ny fifamoivoizana enti-manalavitra anao mba hisorohana ny fandalovan'ny botnets Source .